Isicelo se-YouTube se-PS4 manje sikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo angama-360 nge-PlayStation VR | Izindaba zamagajethi
Unyaka esesizophela ngawo, Bekungunyaka lapho iqiniso langempela lithathe khona ukweqa okulindeleke abasebenzisi abaningi. Ngokusobala, okwamanje amanani obekufanele abakhokhi bokutholwa bakhokhe abephezulu kakhulu, kepha ngokuhamba kwesikhathi intengo yalawa madivayisi izokwehla futhi izotholakala kubasebenzisi abaningi abathanda yona. Izibuko zangempela zokugcina ezifikile emakethe kube ezakwaSony zePS4, izibuko ebezinamahemuhemu okuthi nazo zingahambisana nePC, kepha okwamanje azikho izindaba kulokhu. I-Google isanda kubuyekeza uhlelo lwayo lokusebenza lwe-PS4 ecosystem, okwenza ukuthi ihambisane nezibuko zangempela ze-PlayStation VR.
Ngenxa yalesi sibuyekezo, noma imuphi umsebenzisi onezibuko zangempela zakwaSony uzokwazi ukufinyelela esigabeni samavidiyo angu-360 i-YouTube ebisinikela izinyanga ezimbalwa. Lapho usebenzisa uhlelo lokusebenza, inguqulo engu-1.09 noma ngaphezulu, I-YouTube izosibuza ukuthi hlobo luni lwesixhumi esibonakalayo esifuna ukusivula: indlela ejwayelekile yokubuka okuqukethwe ku-TV yethu ngendlela yendabuko noma i-PSVR, njengoba igama likhombisa ukuvula ipulatifomu ngqo lapho singathola khona amavidiyo angama-360.
Okwamanje i-YouTube inikeze leli thuba kuphela kubo bonke abasebenzisi be-Google Cardboard, i-Samsung VR, nezinye izibuko zangempela ezibonakalayo lokho isivumela ukuthi sikujabulele okuqukethwe okurekhodwe ngama-degree angama-360 kusuka ku-smartphone yethu. Kepha kubonakala sengathi uhlelo lokusebenza alusebenzi ngendlela obekufanele futhi baningi abasebenzisi abathi lo msebenzi awulungile ngokuphelele, ngoba ikhwalithi yamavidiyo amaningi ishiya ifiseleka kakhulu. Asazi noma kungenxa yejubane lokuxhuma noma ikhwalithi yamavidiyo uqobo, into engingayikhumbula kakhulu ngeGoogle ngemuva kwakho konke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Isicelo se-YouTube se-PS4 manje sikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo angama-360 nge-PlayStation VR
i-ps4 ngeke ikuvumele ukuthi ulande inguqulo 1.9 ye-yotube